काँग्रेस महाधिवेशन एक दिन पनि सर्दैन : देउवा – कामना डेली
प्रकाशित मिति २०७८ श्रावण २, शनिबार ०८:०८
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनका प्रारम्भिक मतदाता (क्रियाशील सदस्य) को विवाद समाधानउन्मुख भएकाले अब महाधिवेशन भदौमै हुने भएको छ । क्रियाशील सदस्यको विवाद ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा समाधान भएको छ भने बारा र सप्तरीमा केही दिनभित्रै टुङ्ग्याइने भएको छ ।
निर्देशिकामा देखिएका समस्या समाधानका लागि पदाधिकारी बैठकले पार्टीका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाललाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले दिए । बैठकमा सभापति देउवाले पार्टीको महाधिवेशन एक दिन पनि सार्न सकिँदैन’ भन्दै अन्य समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ भनेर महाधिवेशन तोकिएको समयमै गराउने आफ्नो अडान दोहो&yen;याउनु भएको जानकारी मुख्य सचिव पौडेलले दिए ।
समितिमा संयोजक रमेश लेखक, सदस्यहरूमा आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, श्यामकुमार घिमिरे, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी हुनुहुन्छ । निर्देशिकामा रहेका कतिपय प्रावधान र विधानले पारेका अप्ठ्यारालाई समाधान गर्न शनिबार नेताद्वय डा. महत र डा. रिजाललाई निर्वाचन समितिसँग बसेर टुङ्ग्याउन पनि पदाधिकारी बैठकले जिम्मेवारी दिएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
दाङका कुनैपनि क्रसर उद्योग मापदण्ड अनुसार छैन्न-प्रजिअ कुरुम्बाङ
प्रादेशिक सरकार : बजेटका लागि अध्यादेशको सहारा